Diblumaasi Turkiga u dhashey oo lagu dilay Ciraaq. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Jul 17, 2019 289 0
Wakaaladda Anaadool ee laga leeyahay wadanka Turkiga ayaa baahisay in wadanka Ciraaq lagu dilay diblumaasi Turki ah, oo ka shaqeynayay qunsuliyadda magaalada Arbiil.
Waxay Wakaaladdu sheegtay in ku xigeenka qunsuliyadda Turkiga ee magaalada Arbiil iyo tiro kamid ah ilaaladiisa lagu dilay magaalada, xilli ay ka shaaheynayeen maqaaxi ku taalla nawaaxiga qunsuliyadda.
Wasaaradda arimaha dibadda Turkiga ayaa qoraal ay iyaduna soo saartay waxay ku sheegtay in mid kamid ah howlwadeennada qunsuliyadda Turkiga ee Arbiil lagu dilay meel ka baxsan qunsuliyadda, kadib markii weerar lagu soo qaaday.
Ilo xog ogaal ah oo warbaahinta la hadlay waxay sheegayaan in masuulkan katirsan qunsuliyadda Turkiga ee Arpiil lagu dhex dilay maqaaxi uu xilligaas ku sugnaa, islamarkaana ay weerar kusoo qaadeen rag hubeysan.
Turkiga wuxuu ku hanjabay inuu qaadi doono tallaabo deg deg ah, hadii ayuu yiri si dhaqsi ah loogu soo gacan gelin waayo ragga dilka geystay.
Bayaanka kasoo baxay wasaaradda arimaha dibadda Turkiga waxaa sidoo kale tacsi loogu diray ehellada masuulka ku dhintay weerarka ee ka shaqeynayay qunsuliyadda Turkiga ee magaalada Arbiil.
Inkastoo wakaaladda Anadool ay ku tilmaamtay masuulka la dilay inuu ahaa ku xigeenka qunsuliyadda, hadana wasaaradda arimaha dibadda waxay ku ekeysatay keliya in ninka ay ku tilmaamtay howlwadeen katirsanaa qunsuliyadda.